Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက် - Porn စာအုပ် (2nd တည်းဖြတ်ခြင်း) ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်
ညစ်ညမ်း / လိင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်း
Wilson ၏စာအုပ်သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးကတည်းက“ ညစ်ညမ်းစာပေလေ့လာခြင်း” အမျိုးအစားတွင်မအောင်မြင်သော Amazon အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။
~ ဂူစတာဗိုတာနာ၊ XBIZ: စက်မှုအရင်းအမြစ် (2021)
အဆိုပါ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် စာအုပ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ စာဖတ်သူများသည်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံနှင့်အင်တာနက်အပြာစာပေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ သိသိသာသာပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှုအားဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေမှုအသစ်သည်အော့ဖ်လိုင်းကိုခြေရာခံရန်နှင့်နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အရာများကိုလေ့လာရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါပြcauseနာများအကြောင်းလေ့လာပါ။ စွဲကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာ၏အလုပ်လုပ်နေသောဗဟုသုတကသင့်အား၎င်း၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာရန်တားဆီးလိမ့်မည်။
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ တစ်ဦးအဖြစ်ရရှိနိုင် Kindle ($5.99 / £ 3.99 / 3.99 €) နှင့်ထဲမှာ Paypal ကနေတစ်ဆင့် pdf format နဲ့။ 180 စာမျက်နှာများ, 50,000 wor ds ။ Safari browser ကိုသုံးသောသုံးစွဲသူများသည် PDF edition ကိုကူးယူရာတွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အခြား browser ကိုသုံးပါ Commonwealth ကိုဆက်သွယ်ပါ။
စာအုပ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် ထုတ်ထားသောစာမိတ္တူ နှင့် အော်ဒီယိုစာအုပ်များ ဗားရှင်း:
ဒီနေရာမှာ order paperback or at အမေဇုံ။ သင်ဤ link ကို အသုံးပြု၍ အမေဇုံမှသင်မှာယူပါက ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်သွားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သ, Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒတ်ခ်ျ၊ အာရဗီ၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဂျာမန်၊ ရုရှားနှင့်ဂျပန်ဘာသာများသို့ပြန်ဆိုထားသည်။ ဘာသာပြန်များပိုမိုလမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်၊ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ၊ ဟင်ဒီနှင့်တူရကီဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည့်ဗားရှင်းများတွင်အလုပ်လုပ်နေပါသည်။ ဘာသာပြန်ချက်များကိုကြည့်ပါ.
အဆိုပါအမိန့် အော်ဒီယိုစာအုပ်များပေါ်တွင် အမေရိကန် Audible.
ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှု Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် FaceBook စာမျက်နှာ or တွစ်တာ သက်ဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့။
မှတ်ချက် - YBOP မှရရှိသောငွေများအားလုံးသည် porn ၏သက်ရောက်မှုများကိုပညာရေးနှင့်သုတေသနကိုအားပေးသည့်ဗြိတိန်မှလှူဒါန်းခြင်းသို့သွားသည်။
အုပ်ရေ 100,000 ကျော် ရောင်းချပြီး။
"ဒီစာအုပ်မှာဂယ်ရီ Wilson ကအင်တာနက်အမြန်နှုန်းနဲ့မြန်ဆန်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းစေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်တဲ့အထောက်အထားများစွာကိုတင်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်အမေဇုံနှစ်မျိုးလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအသစ်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်၏အလွန်ကောင်းသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ၏စီးရီးသည်၎င်းသည်မည်မျှသက်ဆိုင်ပြီးအထောက်အကူပြုကြောင်းသက်သေထူသည်။ အဆိုပါစာအုပ်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အသင့်လျော်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အာရုံကြောသိပ္ပံ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်ဆင့်ကဲသီအိုရီအခြေခံမူများအတွင်းအခိုင်အမာအမြစ်တွယ်နေသည်။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်အကြံပြုထားသောနည်းလမ်းများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏အခြေခံမူများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းတို့တွင်သတိလစ်စိတ်၏နက်နဲသောအရာများသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်ကျသောကုထုံးများကိုစုံစမ်းခြင်းမပါဝင်ပါ။ ဤစာအုပ်သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသတင်းတရားကိုမဟောပြောပါ။ စမ်းသပ်တဲ့စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာနှစ် ၄၀ ကျော်လှုံ့ဆော်မှုအခြေခံကိုသုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီး Gary ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဟာငါတွေ့သမျှအားလုံးနှင့်အလွန်ကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
~ (ပါမောက္ခ) ဖရက်ဒရစ် Toates, Open University, အင်္ဂလန် `၏စာရေးဆရာဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အလုပ်လုပ်: ထူးခြားတဲ့တိုက်တွန်း''
“ ဖြစ်ရပ်အသစ်တွေနဲ့မကြာခဏဖြစ်ပျက်သလိုပဲ၊ သိပ္ပံပညာဟာအတွေ့အကြုံတွေနောက်ကျနေတယ်။ သူက၎င်း၏အမည်ကိုမပြောဝံ့သောစွဲစူးစမ်းအဖြစ်ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခုအတူတကွအတူတကွတတ်၏။ ဤစာအုပ်သည်စွမ်းအင်၊ အရေးတကြီး၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်ရုန်းကန်နေရသူများကိုပြန်လည်နာလန်ထူရန်မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ Clinician တစ်ယောက်အနေဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏စာမျက်နှာများအတွင်းရှိပုံပြင်များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကမ်းလှမ်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒီစာအုပ်ကိုလက်လွတ်မခံသင့်ဘူး။ ”
~ ဒါဝိဒ်သည် McCartney, MD မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုစွဲအထူးကု, Edinburgh
ဤအရေးကြီးသောစာအုပ်ထဲတွင်ဂယ်ရီ Wilson သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု / ဆန္ဒပြည့်ဝမှုအတွက်သက်မဲ့အရာဝတ္ထုကို အသုံးပြု၍ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအတွက်အတင်းအကြပ်အသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောဇီဝစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။ ဤစာအုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော“ rebooting” လုပ်ငန်းစဉ်၏ဥပမာများစွာကိုဖော်ပြထားသည်။ သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြန်ပေးဆွဲတဲ့အခါ ဦး နှောက်ဇီဝကမ္မဗေဒပြောင်းလဲမှုကိုရှင်းပြပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အချိန်ယူရတဲ့အကြောင်းတွေပါပါတယ်။
~ Reid Finlayson, MD ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ, ဗန်ဒါဘစ်လ်ဘက်စုံအကဲဖြတ်အစီအစဉ်, လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ
နောက်ဆုံးမှာဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေ porn အပေါ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ငျြ့တရားကြားနေနှင့်သိပ္ပံနည်းကျခိုင်မာတဲ့ရှင်းပြချက်။ ဤစာအုပ်ညစ်ညမ်းစွဲဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံ၏ပုံပြင်များရာပေါင်းများစွာတို့ကဖွင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုဖြစ်ကြောင်းထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်များအတွက်မဟာဗျူဟာများထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးပြည့်စုံဇီဝဗေဒနှင့်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာတူးဖော်ရေးပေးပါသည်။ ဒီအကုသ, လိင်ပညာပေးနှင့်လိင်ခံစားဂရုစိုကျတဲ့သူလူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
~ ပါလာ Hall, PhD, လိင်ကုထုံး, စာရေးသူ လိင်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်စွဲလမ်းမှုရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးမှုများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကပထမပြင်ဆင်ချက်အခွင့်အရေးများအပေါ်ကိုယ်ကျင့်တရားချိုးဖောက်မှုအားပယ်ချခဲ့သည်။ ယခုဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ကိုလက်ရှိအာရုံကြောသိပ္ပံပညာ၏အကျိုးကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်အသိပေးပြီးမည်သူသည် neuroplasticity ကိုနားလည်သည်ဆိုသောသူအားရှင်းလင်းသည်။
Wilson သည်လိင်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဖြစ်ကြောင်းသင်ကြားခံနေရသောမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံကိုတံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာအပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်၎င်း၏အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်း၊ အော်ဂဇင်အတုနှင့်ရင်သားကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပုံဖော်ထားခြင်းကိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်သည်။ နောမိဝေါလ်ဖ်ကပြောခဲ့သည်မှာ“ ဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းမတွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပဲ။ ” သူမက Tinbergen ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး "supernormal stimulus"
ပညာရပ်ဆိုင်ရာလိင်ပညာရှင်များကသူတို့၏တောင်းပန်မှုနှင့်အဝိဇ္ဇာတို့၏နောက်ကွယ်တွင်ဖုံးကွယ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလာနေသည်။ ဂယ်ရီ Wilson ၏ကျယ်ပြန့်သောဗဟုသုတနှင့်နဗ်ကြောဆိုင်ရာစာပေကိုကျွမ်းကျင်စွာတင်ပြခြင်းကဤပြသနာကိုဖော်ထုတ်ပေးသည်။ ပို။ ပင်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်မှုများ, ညစ်ညမ်းလွယ်ကူချောမွေ့လွယ်ကူသောရောဂါဗေဒအာရုံကြောပလပ်စတစ်လေ့လာမှုဖြစ်စဉ်၏ဆိုးကျိုးများကြုံနေရသူတွေကို၏ဤစာအုပ်ထဲတွင်ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမရှိတော့နှုတ်ပိတ်မရပါ။
~ Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. MD, FAANS, San Antonio တွင်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာတက္ကသိုလ်
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကတည်ရှိကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏အရှိဆုံး, considered နှံ့နှံ့စပ်စပ်နဲ့တိကျမှန်ကန်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
~ Anthony I. Jack၊ Ph.D, ဒPhနိကဗေဒ၊ စိတ်ပညာ၊ Neurology နှင့် Neuroscience ပါမောက္ခ။ Case Western Reserve တက္ကသိုလ်မှကျင့်ဝတ်နှင့်ထူးချွန်မှုဆိုင်ရာ Inamori အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာမှသုတေသနဒါရိုက်တာ
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Porn အပေါ်ဂယ်ရီ Wilson ကအခမဲ့ညစ်ညမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလလေးနက်ပြဿနာများ, အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်လူတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဘယ်လိုပေါများရှင်းပြဖို့ထွက်သတ်မှတ်။ အဖြစ်ယေဘုယျစာဖတ်သူများအဘို့အစွဲ၏သိပ္ပံပညာ၏စစ်တမ်းတစ်ခုပေး, Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်စွဲလမ်း porn အသုံးပြုမှုထဲကချိုးဖျက်ဖို့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ porn စွဲ porn Wilson ကတခုတခုအပေါ်မှာအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်ဆန်းများနှင့်သင့်ဦးနှောက်ဥာဏ်က addressing ကိုအဖိုးတန်သယံဇာတများကိုပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
~ ဒေါက်တာ Nicole Oei PhD, စွဲ, ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း, စိတ်ပညာဌာန, အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်
တိုတောင်းသော YOUTUBE ကဗီဒီယို Watch စာဖတ်သူအားဖြင့်စာအုပ်ဖော်ပြ (YBOP နှင့်အတူဆက်နွယ်မဟုတ်သူ) ။
ပြန် porn အသုံးပြုသူနောဧကိုဘုရားကျောင်းအားဖြင့်စာရေးသူကဂယ်ရီ Wilson က၏ YouTube ကိုအင်တာဗျူး
အောက်တွင်စာအုပ် RELATED ဆောငျးပါး
“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်” - ဖခင်၏ကွန်ယက်စကော့တလန် (စာအုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်)
Gary Wilson နှင့် Carol Coach တို့နှင့်အတူ 'သင်၏ ဦး နှောက်တွင်အပြာ'
ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အတူ "Little ကအက်တမ်" Podcast တခုကို
“ ကျွန်မရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကကျွန်တော့်ဘဝကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်” (တိုင်းမ်၊ ယူကေ)
Psychodentral“ စွဲလမ်းမှု - ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ”
"Porn: ဂယ်ရီ Wilson နှင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်"
ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အတူ "သင်၏အာဏာကိုပြန်ယူပါ။ "
“ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလေးတစ် ဦး အနေနှင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊
“ Porn on Brain: Internet Porn စွဲမှုကိုနားလည်ခြင်း” (podcast)
ညီအလီ၏ Rap Porn သီချင်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း (AFH)
Clyde Lewis ကတွေ့ဆုံမေးမြန်း Ground Zero အပေါ်ဂယ်ရီ (စုစည်းတင်ဆက်ရေဒီယို show ကို)
Fap or Fuck: ရွေးချယ်ရမည့်အချိန် (Vary အင်တာဗျူးဂယ်ရီ)
ဂယ်ရီ၏ Twitter အကောင့်ကိုလိုက်နာပါ
YBOP ၏ FACEBOOK စာမျက်နှာကိုလိုက်နာပါ
McDermott ရေဒီယို Show ကိုအပေါ်ဂယ်ရီ Wilson က
Porn ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအကြောင်းဂယ်ရီ Wilson ကဆွေးနွေးပွဲ (Slickster)
ဂယ်ရီ Wilson က: Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက် (Podcasts)
Porn ကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုလွှမ်းမိုးစေသလား။ “ NoFap” လှုပ်ရှားမှုကဒီလိုပဲတွေးသည်
မည်သို့အွန်လိုင်းလိင်စိတ်ကြွဆေးခုနှစ်တွင်ရီးရဲလ်ဘဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ Lead နိုင်သလား
သင်၏ယောက်ျားနှင့်အတူ Porn ရှုပ်ထွေးနေပုံ (SKEPTIC မဂ္ဂဇင်း - Philip Zimbardo နှင့် Gary Wilson မှဆောင်းပါး)
သငျသညျအလုပျမှာပိုဆိုးတာက Perform ပြုလုပ်ခြင်းမူလစာမျက်နှာမှာ Porn အကဲခတ်သလဲ? (MTV)
ပို။ ပို။ ပို။ သောကိစ္စရပ် - ဖိလစ်ဇင်ဘာဒိုနှင့်ဂယ်ရီဝီလီယန်တို့၏မာတီကလိန်းကိုတုံ့ပြန်မှု
နောက်ထပ်အရောင်း Motivation လိုအပ်ပါသလား? အဆိုပါ Porn ထဲက Cut! (podcast)
သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်” စာအုပ်အသစ်ထုတ်ဝေသည် - အသံလည်း!
porn နှင့်လူမှုတော့ပူပန် (အင်တာဗျူးလူမှု-တော့ပူပန်-Solutions)
porn နှင့် Virility ရန်ခြိမ်းခြောက်မှု (TIME မဂ္ဂဇင်းဧပြီလ 11, 2016 ပြဿနာများအတွက်ဇာတ်လမ်း cover)
တစ်ဦးကရီးရဲလ်ပုဂ္ဂိုလ် (RelationshipSchool) နှင့်အတူလိင်ရှိခြင်း vs porn
porn! ဒါကြောင့်သင်ဟာသည်တကယ်တော့အကောင်းဖြစ်သနည်း | Crowder (ရေဒီယို) နှင့်အတူပိုမိုကျယ်လောင်
Stefan Molyneux အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က
အင်တာနက်က Porn (Podcasts) ၏အန္တရာယ်
Porn အကဲခတ်အဆိုပါ Shock Effect သင့်ကျန်းမာရေး (UniLad) တွင်ရှိထားသည်
Launch အင်တာဗျူးအောင်မြင်ဂယ်ရီ Wilson က (Podcasts)
“ သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်စွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာ” ၏ဘာသာပြန်ချက်များ
ဗွီဒီယို - DEBUNKED: Top Porn စွဲလမ်းမှုအမှားများ! (လူလိမ်လူအစုအဝေး)
ဗီဒီယို: ဘာကြောင့်လဲ Porn အတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲ [SFW]
XXX က: Porn စွဲ (Native အမေရိကတိုက်ရေဒီယို Calling)
YBOP တည်ထောင်သူဂယ်ရီ Wilson က Reader ကိုမေးခွန်းများအဖြေများ, အားလုံးပြောပြ
အာရဗီယခုရရှိနိုင် Porn စာအုပ်ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်!
ဒတ်ခ်ျအတွက်ယခုရရှိနိုင် Porn စာအုပ်ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်!
Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: ဘယ်လို XHamster နှင့် PornHub သငျ့စိတျ (IBTimes) ပုပ်နေကြတယ်
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ porn (Buzzfeed)
က Rob Wolf ကအင်တာဗျူးများဂယ်ရီ